कतै यसरी त चार्ज त गर्नुहुन्न आफ्नो स्मार्ट फोन ? जान्नुहोस् यी कुरा::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
कतै यसरी त चार्ज त गर्नुहुन्न आफ्नो स्मार्ट फोन ? जान्नुहोस् यी कुरा
ब्याट्रि शत प्रतिशत चार्ज भएपछि पनि तपाईं त्यसलाई प्लगबाट हटाउनुहुन्न मोबाइल ? यो गलत हो । यसै कारणले फोनको ब्याट्रि लगातार खराब हुने गर्दछ ।
फोनको ब्याट्रि चार्ज भएपछि पनि यदि तपाईं प्लगमा राखिरहनुहुन्छ भने यसले ब्याट्रिमा नकारात्मक असर पुर्याउँछ ।
फोन पूर्ण रुपमा चार्ज भएपछि यसलाई तुरुन्त हटाउनुहोस् । अझ शत प्रतिशत चार्ज हुनुभन्दा पहिले नै फोनलाई चार्ज हुनबाट रोक्नुहोस् ।
वाइफाईको पासवर्ड यसरी सजिलै थाहा पाउनुहाेस् (उपायसहित)
डरलाग्दो अध्ययन सार्वजनिक: सन् २०५० सम्म सूर्य अप्रत्याशित रुपमा चिसो हुने
४ महिना अगाडि मात्र नेपाल भित्रिएको आइटेल मोबाइल अग्रस्थानमा
वार्षिकोत्सवमा टेलिकमको यस्तो अफरै अफर, अवश्य थाहा पाउनुस्
न्यूजफीडमा फेसबुकले गर्यो परिवर्तन
मोबाइल फोन पानीले भिज्यो ? अवश्य यसो गर्नुहोस् ..